Ezekieri anonzi adye gwaro raanopiwa naMwari (1-15)
Ezekieri anogadzwa kuti ave murindi (16-27)
Kurega kuita basa rake kunounza mhosva yeropa (18-21)
3 Akabva ati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, idya zviri pamberi pako. Idya gwaro* iri woenda kunotaura neimba yaIsraeri.”+ 2 Saka ndakashama muromo wangu, iye akaita kuti ndidye gwaro racho. 3 Akabva ati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, idya gwaro iri randiri kukupa uzadze dumbu rako naro.” Saka ndakatanga kuridya, uye raitapira seuchi.+ 4 Akati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, enda pakati peimba yaIsraeri, uvaudze mashoko angu. 5 Nekuti hausi kutumwa kuvanhu vanotaura mutauro usinganzwisisiki kana kuti vane rurimi rusingazivikanwi, asi kuimba yaIsraeri. 6 Hausi kutumwa kumarudzi mazhinji anotaura mutauro usinganzwisisiki kana kuti ane rurimi rusingazivikanwi, anotaura mashoko ausingagoni kunzwisisa. Kudai ndaizokutuma kwaari, aizokuteerera.+ 7 Asi imba yaIsraeri icharamba kukuteerera, nekuti havadi kunditeerera.+ Vanhu vese veimba yaIsraeri vane misoro yakaoma nemwoyo yakaoma.+ 8 Inzwa! Ndaomesa chiso chako sezvakangoita zviso zvavo uye ndaomesa huma yako sezvakangoita huma dzavo.+ 9 Ndaita kuti huma yako iite sedhaimondi, iome kupfuura dombo rakaomarara.+ Usavatya kana kuvhundutswa nezviso zvavo,+ nekuti ivo imba inopanduka.” 10 Akatizve kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, teerera mashoko ese andinokuudza uaise mumwoyo mako. 11 Enda pakati pevanhu vekwako*+ vakatapwa utaure navo. Uti kwavari, ‘Izvi ndizvo zvataurwa naChangamire Ishe Jehovha,’ pasinei nekuti vachateerera here kana kuti vacharamba.”+ 12 Mweya wakabva wanditakura,+ uye ndakanzwa kutinhira kukuru kwakanga kusinganyarari shure kwangu kuchiti: “Kubwinya kwaJehovha ngakurumbidzwe panzvimbo yake.” 13 Painzwika ruzha rwemapapiro ezvisikwa zvipenyu sezvo ainge achigumana,+ uye painzwika kutinhira kwemavhiri aiva pedyo nazvo,+ nekutinhira kukuru kwakanga kusinganyarari. 14 Mweya wakabva wanditakura, ukandiendesa, uye ndakaenda ndiine shungu, ndakatsamwa, uye ruoko rwaJehovha rwakagara pamusoro pangu zvine simba. 15 Saka ndakaenda kuvanhu vakatapwa vaiva kuTeri-abhibhi, avo vaigara pedyo nerwizi rwaKebhari,+ ndikagara ipapo pavaigara. Ndakagara navo kwemazuva manomwe, ndakavhiringidzika.+ 16 Pakapera mazuva manomwe, shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti: 17 “Mwanakomana wemunhu, ndakugadza kuti uve murindi weimba yaIsraeri;+ uye kana ukanzwa shoko kwandiri, unofanira kuvanyevera zvandinenge ndakuudza.+ 18 Kana ndikati kumunhu akaipa, ‘Chokwadi uchafa,’ asi iwe worega kumuyambira, uye worega kutaura kuti uyambire munhu wacho akaipa kuti asiye nzira yake yakaipa kuti arambe ari mupenyu,+ iye achafira kukanganisa kwake nekuti akaipa,+ asi ndichabvunza ropa rake kwauri.*+ 19 Asi kana ukayambira munhu akaipa, iye orega kusiya zvakaipa zvake uye nzira yake yakaipa, achafira kukanganisa kwake, asi iwe uchazviponesa.+ 20 Asi kana munhu akarurama akarega kuita zvakarurama oita zvakaipa, ndichaisa chinhu chinogumbura pamberi pake uye achafa.+ Kana usina kumuyambira, achafira chivi chake uye mabasa ake akarurama haazoyeukwi, asi ndichabvunza ropa rake kwauri.*+ 21 Asi kana iwe uchinge wayambira munhu akarurama kuti asatadza, iye orega kutadza, chokwadi iye acharamba achirarama nekuti akayambirwa,+ uye iwe uchange wazviponesa.” 22 Ruoko rwaJehovha rwakauya pandiri ikoko uye akati kwandiri: “Simuka uende kubani, uye ndichataura newe ikoko.” 23 Saka ndakasimuka ndikaenda kubani, uye kubwinya kwaJehovha kwaiva ikoko;+ kwainge kwakafanana nekubwinya kwandakaona pedyo nerwizi rwaKebhari,+ uye ndakapfugama, ndikadzikisa musoro wangu. 24 Mweya wakabva wapinda mandiri, ukaita kuti ndisimuke,+ uye akataura neni, akati: “Enda unozvivharira mumba mako. 25 Zvino iwe mwanakomana wemunhu, vachaisa tambo pauri vokusunga nadzo kuti usabuda uchienda pakati pavo. 26 Ndichaita kuti rurimi rwako runamatire kumusoro mumukanwa mako, uye uchava mbeveve, usingakwanisi kuvatsiura, nekuti ivo imba inopanduka. 27 Asi pandinotaura newe, ndichavhura muromo wako, uye unofanira kuti kwavari,+ ‘Izvi ndizvo zvataurwa naChangamire Ishe Jehovha.’ Munhu ari kuteerera ngaaterere,+ uye ari kuramba kuteerera ngaarambe, nekuti ivo imba inopanduka.+
^ ChiHeb., “pevanakomana vevanhu vekwako.”
^ Kana kuti “ndichaita kuti uve nemhosva yeropa rake.”